Travel World: July 2011
this is an accident.. Kindly accept my apology for this post. Gosh.. Ko Aung Zay, you should have talked to him directly. this kind of stuffs will make us to "red-tape" the posts then it will not beagood idea for "efficiency." Anyway,
DEAR ADMINS!!! LET'S CLOSE THIS TOPIC FROM ONLINE!! PLS DO NOT REPLY THIS POST BECAUSE THIS SUBJECT IS NO LONGER ONLINE AND THUS WILL BE DISCUSSED!
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/ah9rv8EAeRoJ.
Posted by Travel at 10:33 PM0comments
( REPLY BY MOHT ) ( about workshop at NAYPYIDAW ) ( 23.8.2011) / Fwd: လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၂၃ သြဂုတ်လ ၂၀၁၁
Dear All Authority Concerns of MOHT,
Justanote to say how much we appreciate your listening to us. We do
hopeachance that all guides can meet with some authority concerns of
moht to be able to explain what are the difficulties, feelings,
thoughts, wishes....etc., and how we try our best for the progress of
We've expected it since long long ago.
Finally our dreams will be going to come true.
Only one question is which kind of topic could we discuss in the workshop?
We would like to know the topic clearly due to prepare in advance.
Thanks again for your invitation to us.
Emerald ( G-0111 ) / Eng/Spanish Guide / Ex- French Guide
On Sun, Jul 31, 2011 at 7:45 PM, MOHT <mo.moht@mptmail.net.mm> wrote:
Dear Emerald Twenty-five,
The answer is in your questions which you want to convince your
difficulties,feelings, thoughts, wishes...etc., to the authority's
The point is you should prepare your paper concise, definitive, proper
and meaningful within the limited pages so as to be understood by the
If you have questions, contact with Director or Director General Of
The Directorate of Hotels and Tourism.
သို့လိုင်စင်ရ ဧည့်လမ်းညွန်များအားလုံး
ဧည့်လမ်းညွန်များအားလုံးကို ၂၃-၈-၂၀၁၁ နံနက်(၉)နာရီတွင်
ဧည့်လမ်းညွန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပါရန်
၂။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ၊ တက်ရောက်မည့် တစ်ဦးချင်းဧ။် ခရီးစရိတ်၊
တည်းခိုစရိတ်၊ စားသောက်စရိတ်များကိုဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ
၃။ ဆွေးနွေး တင်ပြလိုသူ ဧည့်လမ်းညွန်များအနေဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွန်များအသင်း (ယာယီ) စီမံဌာနသို့ (၁၁-၈-၁၁)ရက်နေ
အမည်စာရင်းပေးပို့ သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၁-၈-၁၁)ရက်နေ
၄။ ဧည့်လမ်းညွန်များအနေဖြင့် မိမိတို့ ဆွေးနွေးတင်ပြလိုသည့်
အကြောင်းအရာများကိုလည်း (စာမျက်နှာ- ၃မျက်နှာခန့် ) ရှင်းလင်းတိကျစွာရေးသားပြီး
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ ကြို တင်တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသဖြင့် -
(က) မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွန်များအသင်း (ယာယီ)မှတဆင့် တင်ပြလိုပါက
(၁၁-၈-၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးဖြစ်စေ
(ခ) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့တိုက်ရိုက် တင်ပြလိုပါက
(၁၂-၈-၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးဖြစ်စေ
၅။ ၃။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ၊ တက်ရောက်နိုင်ရေး
အခက်အခဲတစ်စုံတရာရှိပါက၊ မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွန်များအသင်း (ယာယီ)သို
I have not winced no cried aloud.
Finds and shall find, me unafraid.
For my colleagues, send this famous poem. If you are interested in seeing Burmese version, will send later. Because need to find somebody who can write in Myanmar .
Emerald ( Natmauk Thu )
Re: Re ဥက္ကဌကြီးရဲ့ လက်မှတ်နှင့် ပထမဆုံး မြင်ရသော MTGA အကြောင်းကြားစာ
တစ်ဦးချင်းစီက ခံစားချက်တွေကိုတော့ နားလည် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ်။idea မျိုးစုံ။စိတ်ကူးစိတ်သန်းမျိုးစုံ ရှိကြတဲ့ မ
အပြင် အသစ်မွေးဖွားလာမဲ့ MTGA ကို လွတ်လပ်ပြီး။တရားမျှတမှု
ရှိတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခု့ဖြစ်လာရေး အတွက် လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို လူတွေကို
procedure အောက်နေတဲ့ မူတွေ ကို အနည်းအများ ကြိုးစားပြီး ပြင်ဆင်နေဆဲ
အသံတွေက တော့ အမျိုးစုံကြားလာနိုင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းဇော်ဦး ပြောခဲ့ တဲ့ အတိုင်း နံပါတ် ၂ ။ကိစ္စ မှာ ကျမ
ကျမပြောခဲ့တာက အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေအနေ နဲ့
နှစ်စဉ်ကြေး ကို လ အလိုက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်လကို၂၀၀၀ ကျပ်
ဒီပိုက်ဆံကနေ လူမှုရေး ကိစ္စ လေးတွေ လုပ် ရင် အလှုဒါန မြောက် ပါတယ်ဆိုတဲ့
ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ အနေ နဲ့ ဒီလောက်တော့ ပေးသင့်တယ်ထင်လို့ပါ။
ကျန်တာတွေကတော့ ကျမ နဲ့ မဆိုင်လို့ မပြောတော့ပါဘူး။
Election တစ်ခု့ကို စနစ်တကျတကယ်လုပ်ချင်တဲ့
influence မရှိ။ကင်းကင်းရှင်းရှင်း ရှိနိုင်မဲ့ Tourism Industry
Multi Third Parties မခေါ် လို့တော့ မရဘူးဆရာရေ။
မဲပေးတဲ့နေ့ မှာမဲလာပေးတဲ့သူ တွေအတွက် မဲစာရွက်တွေကို ဘယ်သူကဝေမှာလဲ။?
မဲလာပေးထားတဲ့ မဲစာရွက်တွေကို နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူက ရေတွက်မှာလဲ။?
မဲစာရင်းဇယား final result ကို ဘယ်သူကရေးမှတ်မှာလဲ။?
admin work တွေ။ paper work တွေ။ အများကြီး ရှိလို့ ။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြုလုပ်ကြမဲ့ ဆရာကြီး။ဆရာမကြီး များ ၏ ကျန်းမာရေး
ကော်မရှင်ဆရာကြီး။ဆရာမကြီး များ ကိုယ်တိုင် မဲပုံးကိုင်။
စိတ်ကူးလေးနဲ့ဘဲ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။လက်တွေ့ မှာ မသက်သာလှတဲ့
စဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ အသင်းအဖွဲ့အစည်း
တော်တော် များများ ဟာ ဒီအတိုင်းဘဲ
ဆရာမသိသေးတဲ့ election သတင်းတပုဒ်ကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါဦးနော်။
ချောချောကြေးမုံ (G-1019 / 1995 )
On Jul 30, 9:22 am, Bo Saw <saww.myan...@googlemail.com> wrote:
> တကယ်တမ်း Field ထဲမှာနေတဲ့ Guide က ထောင်ဂဏန်း သာသာပဲရှိမယ် ။
> နောင်တိုးလာမဲ့အရေအတွက် အတွက်ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီး ရွေးတာလို့ထင်မိတာပဲ။
> On Jul 29, 8:44 pm, winzaw oo5 <winzaw...@gmail.com> wrote:
> > သှို/
> > ဥက္ကဌ
> > မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်အသင်း(ယာယီ)
> > ရန်ကုန်မြို့။
> > ကျနော် ကိုဝင်းဇော်ဦးပါ။လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးပါ။ဥက္ကဌ ကြီးရှဲု
> > လက်မှတ်နဲ့ ထုတ်တဲ့ တရားဝင်စာ ကို ပထမဆုံးမြင်ရတော့ စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။
> > ကျနော်တို့ ဧည့်လမ်းညွှန်များရဲ့ လက်ရှိ ဥက္ကဌ၊ လွတ်လပ်သော
> > ဧည့်လမ်းညွှန်များ အသင်းရဲ့ တရားဝင် လက်ရှိဥက္ကဌ ရဲ့ လက်မှတ်ထိုးနဲ့
> > ရုံးစာကို မြင်ရတော့ အတိုင်းမသိ ခံစားရပါတယ်။
> > ၁၅.၅.၂၀၁၁ ရက်နေ့လည် ဆရာဦးမျိုးသန့် အိမ်မှာ ပထမဆုံးသော နယ်
> > ကိုယ်စားလှယ် စုံ ညီအစည်းအဝေးကြီးကို မနေ့ တနေ့ ကလို မြင်ယောင်နေဆဲပါ။
> > လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြ ၊ငြင်းခုန်ကြ၊ ရန်ဖြစ်ကြ ၊ ဖြန်ဖြေကြနဲ့။
> > ကျနော်တင်တဲ့
> > ၁။ဘာသာစကားအလိုက် အုပ်စုလေးတွေခွဲဘို့
> > ၂။ ၂၀၀၀၀+၂၀၀၀၀ ကို မနိုင်ဝန်မို့ လျော့ပေးဖို့ ( မချောတောင် ကျနော့် ကို
> > စိတ်ဆိုးသေးတယ်)
> > ၃။ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း ပြင်ကြဖို့ ( ကိုချမ်းယိမ်းစိတ်ဆိုးခဲ့)
> > ၄။ဧည့်လမ်းညွှန်များရဲ့ လူမှုရေးကိစ္စလေးတွေ အဓိကလုပ်ဖို့( ကိုကိုလတ်တောင်
> > စိတ်ဆိုးသေး)
> > ၅။ ရန်ကုန်နဲ့ နယ် ၃ နယ် ၁၅+၄+၄+၄ ၀န်ကြီးဌာနမှာတင်ကြဖို့(
> > အားလုံးသဘောတူ တင် ခဲ့ပြီး)
> > ညနေစောင်းတဲ့အထိ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ငြင်းခုံခဲ့ကြတယ်လေ။ အပြန်
> > မချောကားနဲ့ ကျနော် နဲ့ ကို ချမ်း ယိမ်း တို့ လမ်းကြုံ လိုက်လာကြတာ...
> > သတိယတုန်းပါဗျာ။
> > အဲဒီထဲက ဘာတွေ ဖြစ်လာပြီလဲ ဆို ပြန်ကြည့်ပါတယ်။၁ နဲ့ ၂ တော့ ဖြစ်လာပါပြီ။
> > အင်း အခုတော့ ကျနော့်ုသူ့ကိုယုံကြည်လို့ ရန်ကုန်ထိလာရောက်
> > လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ကိုသန်းထွန်းဦး ကိုလည်း မကြားရတာကြာပေါ့။
> > မကြာမီကျင်းပကြမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ ဥက္ကဌ ကြီး အပါအ၀င်
> > ကိုချမ်းယိမ်းတို့ ကျနော် ၊ကိုရဲမြတ်ထွန်းအပါအ၀င် လှုပ်ရှားမှုတွေက အနားယူ
> > ဘေးထွက်နေကြတော့မယ် ဆိုတော့.. MTGA ကြီး ကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မဖွဲ့ရသေးခင်
> > (ယာယီ) ဆိုတာကြီး မဖြုတ်ရသေးခင် ရပ်နား လိုက် ကြ ရတော့မှာ
> > စိတ်မကောင်းပါဘူး၊
> > ကျနော် တစ်ဦးတည်းသဘောကတော့ အသင်းကြီးတရားဝင် မပေါ်ပေါက်သေးခင်
> > ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးလုပ်တာ စောပါသေးတယ်။ ဧည့်လမ်းညွှန်စုံညီ စည်းဝေးပွဲကြီး
> > အရင် ကျင်းပပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင် အရင် ဆုံးလုပ်ရမှာပါ အလွန်ဆုံး
> > ကြာ နောက် ၂ လ ပေါ့။ ဘာကြောင့် အလောတကြီး လုပ်ချင် နေကြတာလဲ။ ပုဂိုလ် ရေး
> > မကြေနပ်မှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ အားလုံး သော ဧည့်လမ်းညွှန်များ အတွက် စဥ်းစားကြ
> > ပါ လို့ ပြောလိုပါတယ်။
> > ဌာနဆိုင်ရာ အရာ ရှိများ၊ လက်ရှိ ခိုင်မြဲပြီး အသင်းအဖွဲ့များ ၊ကျနော်တို့
> > ကို ၀န်ကြီးက စာ နာ ညှာတာ နေတာကို မကျေနပ်သူများ၊ ကြားမှာ ဘယ် လို အရည်
> > အချင်းရှိသူက ဦးဆောင် ကာကွယ်ပေးမှာလဲ။စိတ်ပူမိပါတယ်။
> > တွေ့ မိသလောက် ..ဖက်ထားတဲ့စာ အုပ်တွေကိုကိုးကား ပညာတတ်ကြောင်း ပြ ပြီး
> > လိုရင်းမရောက် ဝေ့၀ိုက်နေသူတွေ ၊ ငါလုပ်တာကလွဲပြီး ဘယ်သူပြောတာမှ
> > လက်မခံပဲ နား ပိတ် မျက်စေ့မှိတ်ထားသူတွေ၊ ဘေးထိုင်ဘုပြောသူတွေ၊ အဝေးကနေ
> > ရီနေသူတွေ၊ ထောက်ကွက်ရှာရုံ တစ်ခုပဲသိ ပြီး အနာဂါတ် Plan
> > မစဉ်းစားနိုင်သူတွေ၊ ဝေဖန်တာကို မခံနိုင်သူတွေ နဲ့ MTGA ကြီးအတွက်
> > ရင်လေးမိသော်လည်း သံဃာအား ဘုရားသော်မှမလွန်ဆန် သာ တာပဲ လေ ဥက္ကကြီး တို့
> > ကိုချမ်းယိမ်း တို့ ကျနော်တို့ စိတ်မကောင်းစွာ ဆိပ်ဆိပ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။
> > Election Plan နဲ့ Structure ကို သုံးသပ်ကြည့် ရတာ
> > ၁။ ၀န်ကြီး ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်က ၃၀/၄၀ EC နဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ဖွဲ့ စေချင်တယ်။
> > အခု EC 80 တဲ့။
> > ၂။၀န်ကြီးက အစုအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့စေချင်တယ်
> > အခု အားလုံးကို EC များ သည် အမြင့် ဆုံး အဖွဲ့တဲ့
> > ၃။၀န်ကြီးက ဧည့်လမ်း ညွှန်များ အရေး ကို ဧည့်လမ်းညွှန် များသာ ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်
> > အခု မာလ်တီ သာ့ပါတီ ခေါ် ကြီးကြပ်စေမယ်ဆိုပါလား။
> > ၄။နောက် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစားရိတ်...
> > ၅။ ဧည့်လမ်းညွှန်တိုင် အချိန်ကုန် လူပမ်း...အဆိုးဆုံးက
> > ၆။စိတ်ဝမ်းတွေကွဲကုန်ကြမှာ စိတ်မကောင်းဘူး။
> > ဥက္ကဌကြီးခင်ဗျား
> > နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ် အသင်းကြီး အတွက် ( ၂.၈.၂၀၁၁) နေပြည်တော် မှာ
> > ကြိုးစား ခဲ့ပါမယ်။ အခွင့်အရေးရခဲ့ရင်ပေါ့။
> > လက်ရှိ EC များ လည်း စိတ်ဝမ်းမကွဲကြပါနဲ့ဦး၊ စိတ်မလျော့လိုက်ကြပါနဲ့ဦး။
> > MTGA အသင်းကြီး ခိုင်ခိုင်မာမာ အရင်ဆုံး ပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြိုးစားခွင့်
> > တင်ပြ ခဲ့ပါမယ်။
> > လေးစားစွာဖြင့်-
> > ကိုဝင်းဇော်ဦး
> > On 7/29/11, mtga election <mtga.elect...@gmail.com> wrote:
> > > မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်းညွန်များအသင်း(ယာယီ)...
Posted by Travel at 7:18 PM0comments
FW:Spotlight on PTM 2011
From: PATA [mailto:monica=PATA.org@mail75.us2.mcsv.net] On Behalf Of PATA
Sent: Friday, July 29, 2011 5:35 PM
Subject: Spotlight on PTM 2011
Problems reading this email? View it safely on the web
September 6-9, Pragati Maidan, New Delhi
Big India and China Presence
Boosts PATA Travel Mart
Benefit from business created by Indian and Chinese buyers, whose outbound markets are growing at around 12% per year. Network withalarge delegation of buyers and sellers with strong participation from China, Korea, Japan and Chinese Taipei as well as India, Sri Lanka, Nepal and the Maldives.
Register NOW and join us in India for unparalleled networking and contracting opportunities at Asia Pacific's premier travel trade show.
Trade Visitor Day is FREE admission and will be available only on Friday, September 09 from 1015-1700 hrs. Simply register with your business card at Pragati Maidan, Hall 18.
For further queries, email PTM@PATA.org or visit PATA Travel Mart 2011 event page.
Get the Insights – Build the Business
PATA's Strategic Intelligence Centre will be working with Nielsen, 3rd Planet and Visa to create an information-rich, half-day interactive workshop on China and India outbound. It will take place September6in New Delhi, just before PTM. Make informed decisions. Register by August 20 to make sure you have the relevant knowledge on India and China outbound.
CTS Leads Chinese Buyer Delegations
Mr Shi Laishun, Vice President of China Travel Service (CTS) will leadabuyer delegation of 20 independent CTS agents to PATA Travel Mart 2011. CTS is the biggest wholesale tour operator in China, incorporating three major travel brands: CTS, CTI and CMIT. Sheila Leong of PATA Events said: "These high profile outbound buyers from China add extra purchasing muscle at PTM. Sellers will benefit from Chinese purchasing power on the show floor."
Japan Promoting Again at PTM in India
Japan has reaffirmed that it is open and ready for business with its participation at PATA Travel Mart. Various stakeholders from Japan will be there including the PATA Japan Chapter, JTB Corp and the Japan Hotel Association.
Brand Yourself at PTM
Boost your company profile among 1,200 industry professionals by using sponsorship options at PATA Travel Mart. Drive your brand message home. E-mail PTM@PATA.org.
Boutique Opportunities at PTM
PATA Travel Mart has adapted its format to acknowledge India's heritage. To showcase luxury and boutique hotels such as former palaces, royal lodges and colonial hill stations, PATA has createdadedicated luxury and boutique hotel pavilion at the Mart for the first time. Contact PTM@PATA.org.
GetaChance to WinaCar
Hertz Car Rental, together with co-sponsor TTG Asia Media, is givingayellow TATA Nano car away at PTM. The lucky draw is open to all registered PTM delegates. Register now.
Margaret River Motif and the South West Development Commission will showcase and promoteaselection of fine wines from Australia's premier fine wine region.
Join the Buddhist Circuit Train Journey
A special train journey for 50 lucky attendees who can join the Buddhist Circuit special train journey for free. The all-inclusive experience runs September 10-14 and visits many places of Buddhist significance.
PATA Gold Awards Sponsor
Sent to— why did I get this?
Pacific Asia Travel Association · PATA, Unit B1, 28th Floor, Siam Tower · 989 Rama Rama I Road, Pathumwan · Bangkok, Bangkok 10330
__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 6339 (20110731) __________
Posted by Travel at 6:48 PM 1 comments